Ukuhambisa ngenqanawe-uLuhlu lweeNtengiso ezilandelayo
I-NextsChain isebenzisana nabaphethe i-300 + ukubonelela ngokuThumela kwihlabathi liphela.
INkqubo yokuHanjiswa kweeOda
Zeziphi izibonelelo zeNextsChian Shipping?
1. Iqabane kunye nabaphethe ama-300 + kwihlabathi liphela, inkampani yethu iyakwazi ukubonelela ngenqanawa ekhawulezayo kunye nexabiso eliphantsi, enokunceda abathengisi bakwaShopify ukuba bandise ishishini labo lokuwisa. Ayisiyiyo kuphela iUnited States.
2. Isiseko kwinkqubo yethu yokulandela umkhondo we-logistics, i-NextsChain ibonelela ngokulandela umkhondo wokufumana ulwazi malunga nokuhlaziywa kwepasile ngeNextsChain. Inokunceda abathengisi bakwaShopify ukuba babeke iliso kwiipasile zabo kwaye baphathe ii-odolo ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo, kwimeko yokujongana nepasile engaqhelekanga ngexesha kunye nokunciphisa ilahleko.
3. I-NextsChain iya kulungelelanisa isiseko sabathwali kwinkqubo yethu yolwazi olukrelekrele ngexesha lexesha eliphakamileyo njengoLwesihlanu oMnyama kunye neKrisimesi, ukuqinisekisa ukuba abathengi banokufumana iipasile zabo kwangoko.
4. Nokuba yeyiphi ipasile yezoqoqosho, i-Fast Express okanye iShip by Sea, i-NextsChain ihlala ikukukhetha.
Iintsuku ezi-7 ukuya kwezi-11 zeentsuku zoShishino *
Iintsuku eziyi-8 ukuya kwezi-12 zoShishino *
Iintsuku ezi-6 ukuya kwezi-8 zeentsuku zoShishino *
Iintsuku ezi-8 ukuya kwezi-10 zeentsuku zoShishino *
I-3 - 5 yeentsuku zoShishino *
I-5 - 8 yeentsuku zoShishino *
I-6 - 10 yeentsuku zoShishino *
Iintsuku ezi-7 ukuya kwezi-10 zeentsuku zoShishino *
I-14 ukuya kwi-22 yeentsuku zoShishino *
I-15 - 25 yeentsuku zeShishini *
Ixesha lokuThutha elidwelisiweyo alibandakanyi ukuya kuthi ga kwiintsuku ezimbini zokulungiswa (ngaphandle kweMigqibelo, iiCawa kunye neeholide).
Ixesha lokuhambisa ngenqanawa liyaqikelelwa kwaye liqala ukusukela kumhla wokuhambisa ngenqanawa, endaweni yomhla woku-odola, kwaye kunokuthatha ixesha elide kunelilindelweyo ngenxa yedilesi engavumelekanga, iinkqubo zokucoca amasiko okanye ezinye izizathu.
Ngenxa ye-COVID-19, ixesha lokufika eliqikelelweyo liya kuba ziintsuku ezingama-15-45.